ရုပ်ချင်းဆင်တူပြီး သူ့စကားနားထောင်တဲ့မောင်ချောချောလေးကို ကြည်နူးစရာမွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ် - Myanmarload
ရုပ်ချင်းဆင်တူပြီး သူ့စကားနားထောင်တဲ့မောင်ချောချောလေးကို ကြည်နူးစရာမွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
လွန်ခဲ့သော ၁၄ နေ့ က 12:55 October 16, 2020
မင်းသမီးချောလေး​မေမြင့်မိုရ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေပြီး ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ ပွဲတွေကိုတက်ရောက်လျက်ရှိနေတဲ့ သူမကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: May Myint Mo ' s Facebook Acc
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီး ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေပါတယ်။ သူမကတော့ယခုမှာ ရုပ်ချင်းဆင်တူပြီး အမစကားနားထောင်တဲ့ ချစ်မောင်လေးကို ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ " Happy Birthday to my brother ! May all of your wishes come true! Love uမောင်လေး မွေးနေ့မှစယခုထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ပါစေ အနုပညာအလုပ်တွေလဲဒီထက်မကလုပ်နိုင်ပါစေ "ဆိုပြီး ချစ်ရတဲ့ မောင်လေးကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေးမေမြင့်မိုရ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြွေလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကိုအောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Source: May Myint Mo ' s Facebook Acc
Page generated in 0.2315 seconds with5database query and6memcached query.